2010-04-18 ~ Myanmar Express
ဒေါ်လာစားတို့ အမြှောက်ကြိုက်ချက်ကတော့ လွန်ပါတယ်။ မဟုတ်မှန်းသိရက်နဲ့ ကိုယ့်ဆီဘောက်စ်မှာ ဟုတ်ပါတယ်၊ မှန်ပါတယ်၊ အရမ်းကောင်းပါတယ် ဆို ပြီး လာပြောသွားလို့ကတော့ သွား ၃၂ ချောင်းပေါ်အောင်ဖြီးပြီး နောက်က လိုက်ပြီး ပြန်ပြောတာပဲ။ မချေမငံတော့ သွားမပြောနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် စီဘောက်စ်မှာ ရေးလို့ရ ကံကောင်း။ သူတို့အချင်းချင်းတော့ ရှေ့က လူက ဟေး ဆို နောက်က လူ က ဟား နဲ့ ညီနေတာပဲ။ စီဘောက်စ်တွေ၊ ကွန်းမန့်တွေကိုကြည့်အုံးမလား။ သူတို့အချင်းချင်းတွေချည်းပဲ။ ဒါကို အဟုတ်ကြီးမှတ်နေကြတာ။ နွားခြေရာခွက်လေးထဲမှာ ကူးခပ်ရင်း ဘဝကြီးကို သာယာလှပြီထင်နေပုံပဲ။ အချိုကြိုက်တာ၊ အမြှောက်ကြိုက်တာတော့ လူတိုင်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိူးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို လေးစားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေက ပိုပြီး ချိုကြိုက်၊ အမြှောက်ကြိုက်နေတာတော့ အင်မတန် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနကို သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိလို့ စွပ်စွဲချိန်မှာ ရိုင်းစိုင်းမှုမပါတဲ့ ပုံမှန်ဆွေးနွေးတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်တွေကိုတောင် လွတ်လပ်မှုကို အသက်တမျှ မြတ်နိုးတယ်လို့ တကြော်ကြော် အော်နေပေမယ့် မကြိုက်တဲ့ ဘလော့တွေ ဆိုလဲ ဘန်းပစ်တာတွေ၊ သတင်းဌာနတွေဆိုလည်း မဖော်ပြတာတွေ၊ ကော်မန့်တွေ ဖျက်ပစ်တာတွေကို အံ့သြောဖွယ် အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင် နေကြတာတွေကို ဒီနေ့ထိ တွေ့နေရတာ ပိုပြီး စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဒေါ်လာစား အတိုက်အခံ ဘလော့တွေကို ကျနော် ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျင်းတဲ့အချိန်တွေမှာ တကယ်သွားသင့်တဲ့နေရာတွေပါ။ တစ်ချို့ရေးထားတာတွေက အူတက်အောင် ရယ်ရပါတယ်။ ကာတွန်းဖတ်ရတာ၊ ဟာသကားကြည့်ရတာထက် ပိုပြီးရယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပါ။ အချိန်ပေးဖတ်ပြီး ဖတ်ရကျိုးနပ်မယ့် စာတော့ တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ ဒေါ်လာစား ဘလော့တွေမှာ ရှိသမျှ စာအားလုံးက တခြားဆီက ကူးထားတာတွေချည်းပါပဲ။ တခြားမှာ ဖတ်ရင် ရပါတယ်။ တခြားမှာမရှိပဲ အဲ့ဒီမှာပဲ ရှိတာဆိုရင်တော့ မှတ်လောက်သားလောက် ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူးဆိုတာ နှစ်ခု သုံးခု လောက်ဖတ်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးတယ်လို့ ပြောပြီး၊ စီဘောက်စ်နဲ့ ကွန်းမန့်တွေကိုတောင် လွတ်လပ်ခွင့် မရှိတာကို မရှက်မကြောက်တမ်း ယနေ့ထိ လုပ်နေကြတုန်းပါပဲ။ ခုလို ဟိုဖက်ဒီဖက် အတိုက်အခံရေးတဲ့ ဘလော့တွေမှာ cbox မှာ ကောင်းချီးတွေ ပေးထားတာတွေပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်လား၊ မဖြစ်နိုင်လားဆိုတာ ဒေါ်လာစားတို့ အသက်အရွယ်၊ ထမင်းစားတဲ့ ဦးနောက်နဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ blog တိုင်းက ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုရေးကြတာချည်းပဲ။ အဲ့လိုပဲ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ့် blog မှာ ကိုယ့်အမြင်ကို လွတ်လပ်စွာရေးခွင့်ရှိသလို သူများတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ ရေးခွင့်၊ ဝေဖန်ခွင့်ပြုရမယ်။ စီဘောက်စ်တွေ၊ ကွန်းမန့်တွေမှာ ကောင်းကြောင်းတွေချည်းပြောထားတာ။ ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် သာယာနေကြတာလဲ ဒေါ်လာစားတို့။ ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုတွေ၊ မိုက်ရိုင်းမှုတွေနဲ့ သူများနာမည်နဲ့ လိုက်ရေးတာတွေကို ဘယ်သူတွေ အများဆုံးလုပ်နေလဲဆိုတာကို သိချင်ရင် တခြား မကြည့်ပါနဲ့ http://kyeesaytaman.blogspot.com/ နဲ့ http://padaukmyay.blogspot.com/ blog နှစ်ခုကိုပဲ ကြည့်ပါ။ ကျနော် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမဆဲဖူးဘူး။ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုံးလဲ မသုံးဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် blog ပိုင်ရှင်တွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရားကိုတော့ ပြောတယ်။ အဲ့တော့ ဘန်းခံရတယ်။ ကျနော့်ကို ဘန်းတဲ့ blog တွ၊ block တဲ့ နေရာအားလုံးက ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကို သေအောင်မြတ်နိုးပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေးချည်းဗျ။ ဒါက ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ။ ကျနော် စိတ်ဝင်စားလို့ မှတ်ထားပါတယ်။ Your comment has been saved and will be visible after blog owner approval ဆိုတဲ့ ဒေါ်လာစားများကတော့ http://www.demowaiyan.co.cc/ http://peacock-land.blogspot.com/ http://photayokeking.net/ http://justfreeman.blogspot.com/ http://flyingpeacock.blogspot.com/ http://www.yeyintnge.com/ http://komoethee.blogspot.com/ http://www.datacarrier.info/ http://canadamyanmar.blogspot.com/ http://www.zarnimyomayt.co.cc/ http://thadar.blogspot.com/ http://whoiswhoinburma.blogspot.com/ .. တို့ပါပဲ။ ဘာအတွက် ခံထားလဲတော့ စဉ်းစားလို့ကို မရပါဘူး။ လိုအပ်လို့လား ?? Comments on this blog are restricted to team members ဆိုတဲ့ ဒေါ်လာစားတို့ကတော့ http://myatlayngon.blogspot.com/ http://malaria88.blogspot.com/ .. တို့ပါ။ ကိုယ့်လူတွေပဲ ရေးဆိုပါတော့။ comment ပေးလို့မရတဲ့ ဒေါ်လာစားတွေက http://deyea.blogspot.com/ http://www.revolution8888.co.cc/ http://www.myochitmyanmar.org/home http://www.niknayman-niknayman.co.cc/ http://www.wanna23.com/ http://khinmamamyo.blogspot.com/ http://moemyintaung.blogspot.com/ http://zinaye.blogspot.com/ .. တို့ပါပဲ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရေးပြီးရင် အောက်မှာ comment ဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်။ ငါပြောတာ မှားမှားမှန်မှန် ဘာမှပြန်မပြောနဲ့ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့လူတွေက သဘောကျနေပုံပဲ။ ကျနော် cbox ရေးလို့မရ တဲ့ နေရာတွေက http://www.myochitmyanmar.org/home http://myatlayngon.blogspot.com/ http://www.niknayman-niknayman.co.cc/ http://drlunswe.blogspot.com/ http://malaria88.blogspot.com/ http://arzarni.blogspot.com/ http://justfreeman.blogspot.com/ http://www.yeyintnge.com/ http://8888newgenerations.blogspot.com/ http://nge-naing.blogspot.com/ http://ko-htike.blogspot.com/ http://thadar.blogspot.com/ http://masumon.blogspot.com/ http://moemyintaung.blogspot.com/ http://cozan.blogspot.com/ http://chaylanthit.blogspot.com/ http://chittemanawmyae.blogspot.com/ http://gingyi.blogspot.com/ http://udpmyanmar.blogspot.com/ .. တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာပါပဲဗျာ။ သူတို့ စီဘောက်စ်တွေကိုကြည့်လိုက်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတဲ့နဲ့ အဓိပ္ပါယ်တူတဲ့ စကားတွေပြည့်နေတာပဲ။ အော်.. ဒါလား.. ဒီမိုကရေစီ။ http://www.irrawaddy.org/bur/ (IP ကို block ထားပါတယ်တဲ့)... ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ ဘလော့တွေမှာ စီဘောက်စ် ဆိုတာ ထားသင့်တယ်။ စီဘောက်စ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို အကောင်းပြောတာတွေရော၊ အဆိုးပြောတာတွေရော ရှိသင့်တယ်။ ရှိကိုရှိရမယ်။ ကျနော့်ကို အားလုံးက လက်မခံဘူး။ ဒေါ်လာစားတို့ကိုလည်း အားလုံးက လက်မခံဘူး။ ဘယ်လောက် အဓိပ္ပါယ်ရှိလဲ။ ဒီတော့ အချိုတွေပဲ ကြိုက်မနေပါနဲ့ဗျာ။ အမှန်တရားကို လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ရှက်တတ်ကြပါ။ စာရင်းထဲမှာ မပါတဲ့လူတွေကလည်း အချင်းချင်း ဝိုင်းပြောကြပါအုံး။ ဝိုင်းထိမ်းကြပါအုံး။ Myanmar Express
မနက်ဖြန် လူထုအုံကြွမှုကြီးလုပ်မယ်။ သဘက်ခါ ဆန္ဒပြမယ်၊ တစ်ပက်အတွက် လှုပ်ရှားမယ်။ တစ်လအတွင်း ဆူပူမယ် ဆိုပြီး ကဗျာမျိးစုံစပ်၊ ကြေညာချက်မျိုးစုံထုတ်၊ ၈၈၈၈ တုန်းက စစ်တပ်က ပစ်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ ပိုစ့်အသစ်တွေတင် (ဒါတွေချည်း ထပ်နေပြီ) နဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာ ကီးဘုတ်ကိုင်ပြီး တက်ကြွနေကြတယ်။ ပူချင်ကြ၊ ဆူချင်ကြမှာပေါ့ သူတို့တွေမှ မပါရတာ။ တကယ်ဖြစ်တော့ နောက်ဆုံးကနေ ကြောက်ဒူးတုန်နေကြ။ ဘုမသိဘမသိ ပြည်သူတွေကို မိုက်ရူးရဲ ဖြစ်အောင် မြောက်ပေးကြ၊ သေခိုင်းကြတယ်။ ၈၈၈၈ လုံးကို မမေ့ဖို့ ခဏခဏပိုစ့် အသစ်တင်နေကြတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ၈၈၈၈ ထပ်လုပ်ဖို့ အမြဲပြောနေကြတယ်။ ၈၈၈၈ ဆူပူမှုမှာ ကောင်းတာဘာရှိလဲ?? မသိတာလား၊ မသိချင်ဟန်ဆောင်ကြတာလား?? ၈၈၈၈ ဖြစ်တုန်းက နှပ်ချေးတွဲလောင်းနဲပ ဘုမသိဘမသိလူတွေ၊ ကျောင်းသားဘဝ ရူးသွပ်ခဲ့ကြသူတွေနဲ့ မမွေးသေးတဲ့ လူတွေကတော့ ၈၈၈၈ ကို နောက်တစ်ကြိမ်မကဘူး နောက် ၁၀ ကြိမ်ဖြစ်စေချင်မှာပဲ။ အဲ့တုန်းက အဖြစ်ပျက်မှန်တွေကို မြင်ထားတဲ့လူတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါစေဖို့ ဆုတောင်းတယ်။ အမှန်တရားတွေကို မသိရင် သိအောင် ကြည့်ကြပါ။ ရလဒ်ကတော့ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အရှက်ကွဲ။ ပိုပြီးနောက်ကျ။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေကြ။ နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်းများစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာပဲ။ ကောင်းတဲ့ အချက်ဘာရှိလဲ???? ဘာမှမရှိဘူး။ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းရော ဘာထူးလဲ။ ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံအတွက် ဘာမှမထူးဘူး အတူတူပဲ။ NLD-LA နဲ့ တချို့ ကမကထတွေ ကားစီးသွားရတာပဲ ရှိတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ဒေါ်လာစားဘလော့ဂါတွေကတော့ တစ်လတစ်ခါ ဆူပူမှုဖြစ်လေ ကောင်းလေပဲပေါ့။ အနည်းဆုံး ပိုစ့်အသစ်ရတယ်။ အခြေနေကောင်းရင် ဒေါ်လာပိုရတယ်။ ကိုယ့်စီးပွားရေး အဆင်ပြေဖို့ ပြည်သူတွေသေခိုင်းဖို့၊ နိုင်ငံတော်ကို သိက္ခာချဖို့၊ ဖျက်စီးဖို့ ဝန်မလေးသူတွေပဲ ဆူချင်ပူချင်နေကြတာပဲ။ Myanmar Express
ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံ ဘလော့တွေပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ပိုစ့်တွေရဲ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းသော ပို့စ့်များအောက်မှာ အမြဲတမ်း ဘယ်ကနေ ကူးယူဖော်ပြကြောင်း ပါတတ်ပါတယ်။ မပါတဲ့ ပိုစ့်တွေကလည်း အခြားဆိုဒ်တွေမှာ ရှိပြီးသားတွေချည်းပါပဲ။ ဘယ်ဆိုဒ်မှာမှလည်းမရှိ အောက်မှာလဲ ဘာမှရေးမထားဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီပိုစ့်မျိုကို ဆက်မဖတတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်... အဲ့ဒီပိုစ့်ဟာ ကဗျာလိုလို၊ ဘာလိုလို၊ လက်တမ်းရေးထားတဲ့ အစီအငေါ်မတည့် ဦးတည်ချက်မရှိတဲ့ စာပိုဒ်ငယ် တစ်ခုသေချာပေါက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ပါတဲ့ ဘယ်ကနေ ကော်ပီလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆီ ဆက်သွားလိုက်ရင် အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီး ကူယူထားကြောင်းတွေ ထပ်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်သူရေးထားမှန်းကို တင်ထားတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိကြပါဘူး။ ဒါလည်း သူတို့ကို အပြစ်ပြောလို့တော့ မရပါဘူး။ ပိုစ့် တင်နိုင်ဖို့က အဓိက၊ ရေးသားသူဘယ်သူ၊ မှန်လားမှားလား၊ အခြေအမြစ်ရှိလား မရှိလားဆိုတာ အရေးမကြီးဘူးလေ။ အရေးကြီးတာက $$$$$$$. Myanmar Express
IF MUSLIMS THINK MYANMAR IS EVIL
THEN WHAT THE FUCK ARE THEY DOING HERE?
မြန်မာတွေ မကောင်းဘူး ၊ မြန်မာတွေ အရမ်းဆိုးတယ် လို့ ခင်ဗျားတို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ၇၈၆ မွတ်စလင် ကုလားဆိုးတွေ ထင်နေရင်...
(အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ရှိသည့် မြန်မာသံရုံးအား မွတ် ဆလင်မ်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ဗုံးဖောက်ခွဲရန် ကြံစည်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအား မွတ်ဆလင်မ် အကြမ်းဖက်သမ...